Ny Malaza Ao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2017 19:17 GMT
Manomboka amin'i Swalfy, izay toa tsy gaga fa tsy manana tranonkala ny Riyadh Gitex, izay heverina fa tokony ho fampiratiana Teknolojiam-baovao lehibe indrindra any Arabia Saodita. Nandeha nanatrika ny fampirantiana mihitsy izy, saingy tsy nahita toerana fijanonan'ny fiara, ka nanapa-kevitra ny hiala. “Nanapa-kevitra ny hiala aho ary hiverina amin'ny herintaona, angamba Gitex 3000, rehefa tsy mila mandao ny tranontsika isika rehefa hijery ireo teknolojia farany,” hoy izy (amin'ny teny Arabo).
Manahy momba ireo tanora mandainga taona i Starlit_Saudi . “Olona manakaiky ny 20 taona ary manova ny taonany? Ao amin'ny Saodiana ihany,” hoy izy nanoratra, ary avy eo nanontany hoe: “Rahoviana vao tokony hanomboka mandainga amin'ny taonanao ianao?”
Manana lahatsoratra momba ny dian'ny Saodiana mankany Alemaina koa i Fedo, saingy amin'ny fomba hafa. Hoy izy: “Eny ary, ry zalahy, ny hany hananako ho anao dia tsikitsiky vinitra sy ankihibe roa ambony. Mirary soa!”
Mientanentana momba ny fanokafana ny toeram-pikorisàna ao amin'ny misy azy i Nzingha. “Iza no mihevitra fa hisy toeram-pikorisàna an-dranomandry ao afovoan'ny tany efitra? Mazava ho azy fa tsy izaho”, hoy izy nanoratra. Rehefa avy nitantara taminay ny tantara manontolo, dia hoy izy: “Tsy maintsy miaiky aho fa mbola mahita ny hevitra rehetra mahatsikaiky kely momba ny Ice Hockey ao Arabia Saodita.” Mandritra izany fotoana izany, rehefa avy nonina tany ivelany nandritra ny fotoana fohy, tsy dia faly amin'ny fanorenam-ponenana ao Riyadh i Sweet Amir. “Ny hany zavatra ataon ‘ny olona ho mahafinaritra dia ny fiantsenana, ny fihinanana, na fipetrahana ao an-trano mijery televiziona? Jereo tsara ry olona, ​​milaza amiko ianao fa tsy misy mieritreritra zavatra fialam-boly ho an'ny vehivavy? Tsy misy toerana haleha hanaovana bowling, tsy misy toerana hilalaovana billard ary zara raha misy olona mahafantatra izany hoe badminton izany. Ankehitriny aza disoana aho, tiako ny fireneko sy ity tanàna ity, saingy marobe no tokony hatsaraina, “hoy izy nanoratra.
Nanatontosa fihaonana roa ho an'ireo bilaogera i Riyadh tamin'ny herinandro lasa teo: Bissa met Jo, ary nihaona tamin'i Fouad Al Farhan aho.
Ary ankehitriny mankany amin'i Dotsson, izay manao satroka (sa tokony hilaza aho hoe turban?) fanaon'ny sheikh, ary manapa-kevitra hamaly fanontaniana ara-pivavahana. Nahoana? “Ny tanjoko dia ny hampazava fotsiny ny fahadalan'ny olona maro hivoaka aty ivelany,” hoy izy.
Farany, manana fanontaniana vitsivitsy i Ubergirl, satria mieritreritra izy fa mahafinaritra ny mametraka fanontaniana kisendrasera, raha manolo-kevitra anao mba hamaky ny The Lovely Bones avy amin'i Alice Sebold kosa i AhMeD.